Toeram-pisakafoanana malalaka tsara indrindra any Londres
Free Restrooms ao London: Fantaro hoe aiza no misy
Isika rehetra dia mila mahafantatra hoe aiza ny lozam-piaramanidina tsara indrindra any Londres, na isika mitsidika na eo an-toerana. Ny tobim-piantsonan'i Londres (tsy ny tobim- pifaneraserana) dia manana kabine avokoa saingy tsy mahazatra izy ireo ary afaka mividy hatramin'ny 50p isaky ny fitsidihana.
Ireto sambondanitra manaraka ireto dia nofinidy ho an'ny akaiky azy ireo amin'ireo mpizahatany any Londres. (Tadidio fa misy koa ny tranombakoka sy ny galleries rehetra.)
Ny Map Map Great British Public Toilet dia fitaovana ampiasaina hitadiavana trano fidiovana any amin'ny faritra misy anao.
Any akaikin'ny The London Eye
Ny Hall Eye Ticket London dia ao amin'ny County County ary misy toeram-pisakafoanana ambany ambany.
Dingana sasantsasany manaraka any amin'ny Banky Atsimo no mitondra anao any amin'ny Centrebank Centre. Mankanesa ao amin'ny efitrano fetin'ny Royal Royal satria misy toeram-pisotroana kely ao anatin'izany ary madio foana izy ireo. Misy ihany koa ny cafe sy baribe tsara ao, ary koa trano fisakafoanana ivelany.
Any akaikin'ny Antenimieran-doholona / Ambasadin'i Westminster
Ny trano fialan-tsasatra manakaiky an'i Westminster Abbey dia 50 dolara isaky ny fitsidihana. Soa ihany, misy kabine maimaim-poana ao amin'ny faritry ny Parlemanta.
Ny Hall ofisialista metodista dia lalana roa minitra avy ao amin'ny Antenimieram-paritra, manoloana ny Abidjanan'i Westminster, ary eo akaikin'ireo tranom-panjakana avo lenta. Ny kabine dia ao anaty lakaly ary misy fidirana an-davitra. Maninona raha atsaharo ny fisotroana dite iray ao amin'ny Cafe Cafe Wesley, ao anaty lakaly?
Fotoana misokatra: Alatsinainy hatramin'ny zoma 8 am ka hatramin'ny 4 hariva; Asabotsy sy Alahady 9 maraina ka hatramin'ny 4 hariva
Jon Bower ao amin'ny Apexphotos / Getty Images
Toeram-pivoahana an-kalamanjana no miorina eo amin'ny ilany andrefan'ny Trafalgar Square eo am-pototry ny tohatra midadasika. Avy any amin'ny faritra avaratr'Antananarivo (faritra manangana eo anoloan'ny National Gallery) ny tokotany sy ny cafe dia azo aleha amin'ny alàlan'ny ascenseur, na afaka mandeha manodidina ny sisin'ny kianja.
Fotoam-bavaka: Andron'ny 8 hatramin'ny 8 ora hariva
Manana toeram-pitsaboana ny zaza.
Mazava ho azy, afaka miditra foana amin'ny National Gallery ianao ary mampiasa ny tranon'izy ireo maimaimpoana
Toeram-piantsonan'ny Departemantan'ny Oxford
Roger Cracknell Photography / Getty Images
Manana toeram-pivarotana ho an'ny daholobe ireo trano fivarotana rehetra any London Na iza na iza dia afaka mampiasa azy ireo, na mpanjifanao ianao na tsia, ary tsy misy fiampangana mihitsy. Ny tranom-pivarotana maro dia manana toeram-pivarotana malalaka amin'ny seza mihoatra ny iray, ka tsy tokony hiandry ianao.
Ireo izay tokony hahatsiaro ny Lalana Oxford dia Selfridges, Trasadin'i Fraser, Debenhams, ary John Lewis.
Matetika ny McDonalds any Londres dia manana efitra fandroana madio. Raha mbola tsy tonga amin'ny fomba fandoavana mpanjifa aho dia tsy mieritreritra fa manafintohina azy ireny raha toa ka misitrika sy mampiasa ny trano ianao. Na dia misy marika milaza hoe 'Toilets for Custom Only' aza dia mbola azo atao foana ny miala amin'izany.
Ny toerana tsara indrindra hosotroina Champagne any London
Aiza no ahitana ny Best Webcams any London?
Tsidiho ny Museum Sherlock Holmes any Londres
Afaka Maka Sary Eto Amin'ny Lalana Any Londona ve Aho?
Ny sakafo maraina be dia be any Londres
Ny Teasàna tsara indrindra amin'ny Krismasy tsara indrindra any Londres
Ny tsara indrindra any Finlande
8 Fahadisoana mahazatra ao amin'ny Orlando Travel
Car Sharing Services any Washington, DC
Toeram-ponenana ao Montreal Convention Centre: Toerana eo akaikin'ny Palais des Congrès
Afaka mandany vola any Eoropa Atsinanana ve ny pasitera Eurail?
Fialan-tsasatra ao amin'ny fianakaviana any Montana
Fitadiavana fakan-tsarimihetsika - Ahoana no handalinana ny tranolay fanatobiana
Ny Torolalana momba ny Andron'i Memphis Valentine
Michigan Park Indoor Park
Ahoana ny fomba hananana ny Andron'ny lohataona tonga lafatra any avaratr'i New Jersey
Nosy Grand Turk any Turks & Caicos
Savannah Georgia any amin'ny onjam-peo
Ahoana no handefasana fitarainana momba ny hetra amin'ny varotra any Arizona